Mi 11 သို့မဟုတ် 2021 ရဲ့ ရွတ်သမျှ အကုန်ပါတဲ့ Feature Rich ဖုန်းတစ်လုံး — Anycall Mobile
By RKhar M Thant January 13, 20215Mins Read
Xiaomi လို့ပြောလိုက်ရင် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ပြန်ရတာအရမ်းတန်တဲ့ ဖုန်းတွေကို အရင်ဆုံးပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ အခု Mi 11 ကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ခုကြိုပြီး ပြောချင်တာကတော့ Review က နည်းနည်းလေးတော့ ရှည်ကောင်းရှည်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Sit Back, Grab Some Snacks, then Enjoy ပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ Exterior Design ပိုင်းကနေ စလိုက်ကြတာပေါ့။
Design ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် သူက Xiaomi ရဲ့ထုတ်နေကျ Design တွေအကုန်လုံးထဲမှာ Unique အဖြစ်ဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Camera Module က iPhone 11 Pro, 12 Pro လိုမျိုး ဖြစ်နေတာကတော့သိပ်သဘောမကျမိဘူး။ နောက်ပြီး Back Glass ကို AG Matte Finish သုံးပေးထားတာလေး သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လုံးဝကြီး Frosted လုပ်မထားတာမို့လို့ လက်ရာလေးတွေ နည်းနည်းထင်တုန်းပါပဲ။ အိုကေ Back Desgin ကိုချုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သဘောကျပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒါ Flagship ဖုန်းဆိုတာ တန်းသိသွားစေမယ့် ပုံစံမျိုး။
Mi 11 Back Design – Anycall Mobile
နောက် ဘေးက Frame တွေ။ Frame တွေက Frame နဲ့ BackCover ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာ Frame ဘက်က နည်းနည်းလေး အပြင်ထွက်နေလို့ ခပ်ရှရှလေးဖြစ်နေတယ်။ ဘာပဲပြောပြော လူအများစုက Cover တပ်ကိုင်ကြမှာဆိုတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
အရှေ့ဘက် Display မှာ သဘောအကျမိဆုံးက အရမ်းကြီးခုံးအောင်လုပ်မပေးထားတာပဲ။ အရမ်းကြီးခုံးထားတဲ့ တချို့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော် သုံးဖူးတယ်။ သိသာတဲ့တစ်ချက်ကတော့ ကိုင်ရတာ Grip မြဲသွားတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ဖုန်းနဲ့ Photo ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ စာလေးတွေထိုးတော့ အရမ်းကြီးခုံးနေတဲ့ Display တွေမှာဆိုရင် ဘေးဘက်အကွာအဝေးကို မှန်းပြီး နေရာချရတာ အဆင်မပြေဘူး။ အခု Mi 11 ကတော့ သိပ်မခုံးပေးထားလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီဖုန်းကသာ သာမန် ၄ ၅ သိန်းတန်လောက်ဖုန်းတွေဆို ဒီလိုပြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက Flagship Level ဖြစ်သွားလို့ ဒီလိုမျိုး ချေးနည်းနည်းများရတာပေါ့။ စာဖတ်သူတို့ နားလည်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
အိုကေ Display။ ဒီကောင်က Mi 11 မှာ လုံးဝ အာရုံစိုက်ထားတဲ့အပိုင်းပါပဲ။ 2K (ဒါမှမဟုတ်) Quad HD ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ပါ။ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ကြည့်ရတာ တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီ 2K Resolution မှာကို 120Hz ထည့်ပေးထားတော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကားပေါ့ဗျာ။
2K Display ပါတဲ့ဖုန်းတွေ မရှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 2K Resolution မှာ 120Hz Refresh Rate Support လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ ဒီဖုန်းပဲရှိတယ်။ လုံးဝ Smooth နေတဲ့ Transition Effects လေးတွေကို လိုက်ကြည့်နေရတာကိုက အရသာပဲဗျာ Display Mate မှာ A+ ရတာလည်း မဆန်းဘူး။ ရထိုက်ပါတယ်။
Mi 11 Display – Anycall Mobile
ကဲ Color တွေ Saturation တွေအကြောင်း။ OLED Display ဆိုပေမယ့် Color တွေက အရမ်းကြီးစိုလွန်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အပြင်ကနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူပါတယ်။ အဲ့ထက်ကိုမှ နည်းနည်းလေး စိုနေတာမျိုး။ Contrast တွေကလည်းရှိသင့်သလောက်ရှိတယ်။ Resolution & Sharpness ကတော့ 2K Display မို့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
Alright ! နောက်ပြီး LCD Display က Back Light နဲ့မို့လို့ ပိုလင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို 2020 မှာထားခဲ့လိုက်လို့ရပါပြီ။ သူ့ရဲ့ 1,500nits ကြီးက နေရောင်အောက်မှာတောင် ကောင်းကောင်းကြီးသုံးလို့ရနေတာပါ။ အင်း Display ပိုင်းကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့တင် ဒီဖုန်းကို 10 မှတ်ရှိရင်9မှတ်ပေးချင်စရာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့ Battery Consumption ကရော ဘယ်လိုနေမလဲ ? 🤔
အင်း 2K Display ကို 120Hz နဲ့သုံးရတဲ့ အရသာကတော့ ရှယ်ပဲဆိုပေမယ့် Battery Consumption ကတော့ မိတ်ဆက်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ထင်ထားသလိုပါပဲ။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ Screen ဖွင့်ပြီးချထားတာတောင်7မိနစ်ကို 1% နှုန်းကျနေတာပါ။ မိုက်တော့ မမိုက်ဘူး။ နောက်ပြီး လူအများစုသုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်း Facebook (1) နာရီလောက် ပွတ်တယ်။ Tidal နဲ့ သီချင်း (1) နာရီလောက်နားထောင်တယ်။ PUBG (၂) နာရီလောက်ပစ်တယ်။ စုစုပေါင်း နေ့ဝက်လောက်ကို Battery Percentage က 50% ဝန်းကျင်လောက်ကျသွားပါတယ်။
Full HD+ Resolution ကိုဆင်းသုံးမယ်ဆိုရင် ဒီလောက်မကျမှန်းသိပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ 2K, 120Hz ရတဲ့ Display ကို 2K, 120Hz နဲ့ပဲသုံးချင်တာမို့လို့ ပြောင်းမသုံးပါဘူး။ အဲ့အတိုင်းပဲ ဆက်တိုက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Battery Life က စုစုပေါင်း6နာရီခွဲလောက်ထိတော့ ရပါတယ်။
Mi 11 (Bottom Side) – Anycall Mobile
ဆိုတော့ ဒီဖုန်းက ခင်ဗျားတို့လက်ထဲက ဖုန်းတွေလောက်တော့ Battery ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့အတွက်နဲ့ပြန်ရမယ့် Display နဲ့ Performance ကတော်တော်ကြီးကို မိုက်ပါတယ်။ လဲနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အနှစ်ကြီးတွေရမှာပါ။
Performance အကြောင်းကို ခဏနေဆက်ကြမယ်။ အခုတော့ သူ့ကိုအားသွင်းရတဲ့ Charging Time ကိုပြောရအောင် ! အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း 55W Fast Charging ကို Support ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Charger ရော ကြိုးရောပါမလာဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့် Huawei MateBook D14 ရဲ့ 65W Charger နဲ့သွင်းကြည့်တယ်။ အင်း သူက Charger တော့ရွေးတယ်ဗျ။ ကြေညာထားသလို 45min နဲ့တော့ မပြည့်ဘူး။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါသွင်းကြည့်တယ်။ စုစုပေါင်း 1 နာရီနဲ့5မိနစ်လောက်တော့ သွားပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ 65W GaN Charger နဲ့ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်နေမလဲ ကျွန်တော် သေချာမသိသေးဘူး။ နောက် Charger ရောက်လာရင် တချက်စမ်းပြီး ပြောပြပေးပါမယ်။
ကဲ အခု Performance အကြောင်းကိုဆက်ရအောင်ပါ။
ဆိုတော့ Performance ပိုင်း ပထမဆုံး World First Snapdragon 888 ဖုန်းရဲ့ Performance က ဘယ်လိုနေလဲ ? မိုက်ပါတယ်။ ထစ်တယ် Lag တယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့တောင် ပြန်မေးရမယ်။ 120Hz ရောဆိုတော့ ဂိမ်းဆော့ရတာရော၊ ပုံမှန်ပွတ်ဆွဲရတာရော Smooth ဆိုမှ Smooth နေတာပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကိန်းဂဏန်းတွေ ဘယ်လောက်ရမလဲသိချင်လို့ Antutu Run ကြည့်တယ်။ 670,000 ကျော်ရတယ်။ မဆိုးပါဘူး။ အရင် Mi 10 (480,000 ကျော်) ထက်အများကြီးသာသွားတာပါပဲ။
နောက်ပြီး ဒါက 8/128 Version ဗျ။ 8/256 မှာဆိုရင် သူက 690,000 ကျော်ရတယ်။ အဲ့ဒီ 8/256 အတူတူချင်း အနေအထားမှာ တခြား 5nm ပဲသုံးထားတဲ့ Kirin 9000 နဲ့ Mate 40 Pro ထက် 1 ထောင်ကျော်လောက်သာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဆိုတော့ ဒီ Mi 11 က 8/256 version မှာဆိုရင် အခုလက်ရှိထွက်ထားသမျှ ဖုန်းတွေထဲမှာ ဂဏန်းအကြီးဆုံးပါပဲ။
Mi 11 Antutu Benchmark – Anycall Mobile
Performance အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Heating Issue အကြောင်းကိုပါ တပါတည်းထည့်ပြောမှ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ ဂိမ်းဆော့ဖို့ဝယ်မယ့်သူတွေလည်း သိနိုင်အောင်လို့ပေါ့။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ပူတယ်။ တော်တော်လေးပူတာ။ Display ကြောင့်ရော၊ Snapdragon 888 ကြောင့်ရောပါ။ ကျွန်တော် Aircon ပိတ်ပြီး PUBG ကို တစ်နာရီခွဲလောက် ဆက်တိုက်ဆော့ကြည့်လိုက်တာ 42° C လောက်အထိတက်ပါတယ်။ အားကလည်း ခုနကပြောသလို တဖြုတ်ဖြုတ်ကျတာပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ကြိုပြောချင်တာက ဟေး Snapdragon 888 ကြီးနဲ့ Mi 11 က Performance အကောင်းဆုံးတဲ့ကွ။ ဝယ်ပြီး ဂိမ်းဆော့လိုက်ရရင်တော့ကွာလို့ တွေးနေရင် အခုချက်ချင်း မေ့ပစ်လိုက်ပါ။ Battery Life ရော၊ Heating Issue ကရော ဂိမ်းဆော့ဖို့ ဘယ်လိုမှ Recommend မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဂိမ်းပဲဆော့ချင်တာ နောက်ပြီး Snapdragon 888 ပဲ ကိုင်မှာဆိုရင် နောက် ၃ လပိုင်းမှာ ROG4လာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုပဲစောင့်ပါလို့။
Alright ! ဒီဖုန်းမှာ အများကြီး upgrade ဖြစ်မသွားတဲ့အပိုင်းကိုပြောပါဆိုရင် Camera ပိုင်းလို့ပြောရမယ်။ အရင်က Mi 10 တုန်းကလိုပဲ 108MP ကို Samsung ရဲ့ Bright S5KHMX Sensor ကိုသုံးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မလိုတဲ့ Depth Sensor ကိုဖြုတ်ခဲ့တယ်။ Depth Sensor ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ Bokeh တွေတော့ လျော့သွားမှာပဲလို့ မတွေးလိုက်နဲ့ဦးဗျ။ သူ့ရဲ့ S5 KHMX Sensor ရဲ့ Size ကြီးက အကြီးကြီးပဲ။ ရိုက်တတ်မယ်ဆိုရင် Bokeh တွေ အများကြီးဝင်တယ်။
စာအရမ်းရှည်နေမှာစိုးလို့ Camera အကြောင်းကို တသီးတသန့်ကြီး ရေးမပြတော့ဘူး။ သူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကို တချက်ရှိုးလိုက်ပါဦး။ ပြီးရင် ဘယ်လိုထင်မိလဲ ဆိုတာကို အောက်က Comments မှာအတူတူ ဝေဖန်လေကန်ကြတာပေါ့…
Mi 11 (Main Lens) – Anycall Mobile
Mi 11 (Ultrawide Lens) – Anycall Mobile
Mi 11 (Macro Lens) – Anycall Mobile
Mi 11 (Selfie Camera) – Anycall Mobile
အိုကေ ဒီအထိကြည့်လာတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားက တခုခုကိုစောင့်နေတာဖြစ်မယ်။ မှန်းကြည့်မယ် သူ့ရဲ့ Haptic Feedback နဲ့ Harmon Kardon က tune ပေးထားတဲ့ Speaker တွေအကြောင်းမလား ?
အရင်ဆုံး Speakers အကြောင်းကို‌နည်းနည်းလေးပြောမယ်။ Harman Kardon က Tune ထားတယ်ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Sound Signature အတိုင်းပဲ အသံက ကျယ်ကျယ်နဲ့ လွင်လွင်လေးပဲ။ Clarity ကောင်းကောင်းနဲ့ Wide ဖြစ်တဲ့ Soundstage မျိုးကိုရတယ်။ ဖုန်း Speaker ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Bass သံကိုတော့ အရမ်းကြီး မမျှော်လင့်စေချင်ဘူး။ တကယ်လို့ Bass သံ တဗုန်းဗုန်းနဲ့ထုစေချင်ရင်တော့ JBL Speaker တွေသာဝယ်လိုက်ပါလို့ 😛
Mi 11 Speaker tuned by Harman Kardon – Anycall Mobile
ကဲ လာပြီ Haptic FeedBack အကြောင်း။ Xiaomi က သူ့ကိုစပြီးမိတ်ဆက်ကတည်းက Haptic အတွက် Vibrator အကြီးကြီးနှစ်လုံးကို တော်တော်လေးကြွားသွားတာ။ ဆိုတော့ ဘယ်လိုနေမလဲ ? 🤔
Alright ! ကျွန်တော်စမ်းဖူးသမျှ Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ တော်တော်လေးကို immersive ဖြစ်တဲ့ Haptic Feedback ပဲ။ တချို့ Mid Ranger တွေမှာ Flagship အယောင်ဆောင်ဖို့ သုံးသလို ဂျိဂျိ ဂျိဂျိဖြစ်နေတဲ့ Haptic မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။
သူတုန်တာက Sharp ဖြစ်တယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ကို ခံစားလို့ကောင်းနေတာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် ဒီဖုန်းကိုကိုင်မိရင် Fingerprint Unlock နဲ့ စာရိုက်တာကို ခဏခဏလုပ်မိနေတယ်။ အရမ်းကိုမိုက်တဲ့ Experience မျိုးဗျ။ ဘယ်လိုတောင်ပြောရပါ့ 😁 ဝယ်မကိုင်ချင်သေးရင်တောင် ဆိုင်တွေမှာ သွားစမ်းကြည့်လိုက်။ Haptic FeedBack ကောင်းကောင်းကို ကြိုက်တတ်တဲ့သူဆိုရင် ဒီဖုန်းမှ ဒီဖုန်းဆိုပြီး စွဲသွားလိမ့်မယ်။
Mi 11 with Matebook D14 – Anycall Mobile
အင်း ပြောကောင်းကောင်းနဲ့ ပြောလိုက်တာ အဆုံးထိတောင် ရောက်လာပြီ။ တကယ်တမ်းသူ့မှာပါတာတွေ မကုန်သေးဘူးဗျ။ ထိုင်ပြောရရင် တစ်ရက်လောက်တောင် ကြာမယ်ထင်တယ်။ အဲ့ဒါ့ကြောင့် စုံသလောက်နဲ့ ရပ်လိုက်ပါတယ်လို့။
အိုကေ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီဖုန်းက ဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Flagship ဖုန်းကို Flagship ဖုန်းလိုကိုင်ချင်တဲ့သူတွေ အားလုံးအတွက်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
Game မှ Game ဆော့ဖို့ဆို လုံးဝ recommend မပေးပါဘူး။ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး Display ကောင်းကောင်း၊ Speaker ကောင်းကောင်းနဲ့ Netflix မှာ Chill မယ်။ Facebook, Instagram ပွတ်မယ်။ အားတဲ့အချိန်မှ Game လေးတစ်ပွဲနှစ်ပွဲလောက် အပျင်းပြေဆော့မယ်ဆိုရင် Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ ဒီ့ထက်ကောင်းပြီး ဒီ့ထက်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်း လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိသေးပါဘူးလို့ပြောရင်း နောက်ထပ် Article တစ်ခု ထပ်မှာတွေ့ကြရအောင် !